चलचित्र विधेयकमा सबैको सुझाव समेट्छौं : केशव भट्टराई, अध्यक्ष | YesKhabar
२०७६ साल श्रावण २६ गते, आईतवार १२:२८ PM
काठमाडौँ - सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक प्रस्ताव गरेसँगै टीकाटिप्पणी र बहस पैरवी सुरु भएको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डले सरोकारवाला संघ/संस्थाका फ्रतिनिधि राखेर हालै गरेको अन्तर्त्रियामा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले संसद्को चालु सेसनबाटै पारित गर्ने बताउँदै छिटो सुझाव संकलन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिए । त्यसयता विभिन्न माध्यममार्फत प्रस्तावित विधेयकका कमी कमजोरीमाथि केही चलचित्रकर्मीले अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका छन् । बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराई भन्छन्, ‘बहस आवश्यक ठानेरै हामीले विधेयक केही समय रोकेका हौं ।’
राज्यले ऐन, कानुन बनाउने क्रममा राष्ट्रगानलाई प्राथमिकतामा राख्नु अनौठो हैन । खेलकुद, विद्यालय र अन्य निजी तवरका औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रगान सुन्न हुने, हलमा किन नहुने ? त्यहीमाथि फिल्म हल मनोरञ्जनको सार्वजनिक थलो हो । भारतमा पनि हलमा राष्ट्रगान बजाउने प्रचलन छ । जहाँसम्म‘पञ्चायतको जस्तो’ भन्ने कुरो आयो, यो त झन बिलकुल गलत बुझाइ हो । अहिलेको राष्ट्रगानको अन्तर्यमाथिको प्रहार हो यो । के आजको राष्ट्रगानमा एउटा व्यक्ति र वंशजको प्रशस्ति छ ? ‘सयौं थुंगा फूलका हामी...’ भनेको समान्तवादको प्रवर्द्धन हो ? मुलुक भर्खर संघीयतामा गएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने प्रक्रियामै छ ।
यस्तो अवस्थामा बहुलतालाई सम्मान गर्ने राष्ट्रगानको विरोध गर्दा कसको सेवा गरिरहेको अर्थ लाग्छ ?
हाम्रोमा अझै पनि लोकतन्त्र र बहुलताको संस्कार निर्माण हुन सकेको छैन । मेरो विचारमा यस्तो संस्कार निर्माण गर्न राष्ट्रगानले पनि सघाउँछ ।
विकास बोर्ड स्वायत्त बनाउनेबारे विधेयकले बोल्छ । तर, सरकारले चाहेको खण्डमा अध्यक्ष हटाउन सक्ने भन्ने प्रावधानले त फिल्म क्षेत्रमा दलगत राजनीतिक स्वार्थको बढावा गर्दैन ? फेरि यसमा त प्रावधान नै बाजियो ।छलफल क्रममै छौं हामी । पक्कै यो सच्चिएर आउँछ ।
अनमोलको फिल्ममा जसिता
गायक-गायिकाको विषयमा बोल्ने एउटा पनि संस्था रहेनछ: प्रमोद खरेल
‘मलाई विवाह गर्न रहर लागेको छ तर विवाह गर्न केटा भेटाउन गाह्रो रहेछ’ : नायिका निता ढुंगाना
फ्राइडे फिल्मस्: रिलिज भएनन् नेपाली फिल्म, विदेशी फिल्मको पकड !
‘पर्खी बसेँ’ को सिक्वेल बन्ने
जोन अब्राहमसँगको ब्रेकअपपछि टुटेकी थिइन् बिपाशा बसु, करणले दिए साथ